GAME OF THRONES ၏အသံသွင်းတိပ်ခွေများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် GOLDEN ဖြစ်သည် - သတင်း
Game of Thrones မှအသံသွင်းတိပ်ခွေများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် GOLDEN ဖြစ်သည်
သင်၏စိတ်ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းသို့ပြန်ပို့ပါ။ ပါးလွှာသောမျက်ခုံးများ ၀ င်လာသည်။ လူများသည်အင်္ကျီများ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ ယောက်ျားလေးများသည် boot-cut ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။
ယခုဤဖက်ရှင် faux-pas ကို ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းသည် Game of Thrones ၏သရုပ်သကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်ခန့်တွင် Maisie Williams၊ Sophie Turner၊ Emilia Clarke နှင့်အခြား Westeros တို့သည် VCT ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို GoT ဒါရိုက်တာများထံသို့လာမည့်အကြီးမားဆုံးရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲတွင်အခန်းကဏ္ land မှပါရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
Jason Momoa သည် Khal Drogo အနေဖြင့်သူ၏အခန်းကဏ္secureကိုသေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Kristian Nairn သည် Hodor ၏အခန်းကဏ္ for မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်သူ၏ခေါင်းပေါ်တွင်ကြီးမားသောစားပွဲတစ်ခုခင်းခဲ့သည်။ Sansa Stark ကစားသောဆိုဖီတာနာသည်သူမသည်ကျောင်းခန်းမနှင့် Maisie Williams တွင်သူမ၏အသံသွင်းတိပ်များကိုရိုက်ကူးနေသည်ဟုထင်ရသည် Ayra Stark ကအရမ်းသေးလွန်းတယ် !!!
နောက်ဆုံးရာသီအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ရရှိနိုင်သည့် Game of Thrones စာရင်းစစ်တိပ်ခွေများအားလုံးဒီမှာပါ။
Sansa Stark နှင့် Arya Stark Sophie Turner နှင့် Maisie Williams တို့မှတီးခတ်သည်
သူတို့ကစာသားတိုင်းရွားလှမော်ဒယ်နေကြသည် ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမိန်းကလေးများ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည် ငါကဒီမှာရောက်နေပါတယ်။
Emilia Clarke မှပါဝင်သော Daenerys Targaryen ၏တိပ်ခွေ
Emilia Clarke ဟာဒီမိနစ်သုံးမိနစ်ကသူမစိတ်ကူးယဉ်ကောင်မလေးအကြောင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံသည် တစ်ခုလုံး စိတ်ခံစားမှု၏အကွာအဝေး။ နဂါး၏မိခင်အခန်းကဏ္ofကိုရှင်းလင်းစွာရရှိသည်။
Sandor Clegane ခေါ် Rory McCann မှတီးခတ်သည့်တီးဝိုင်း
00:58 မှာအံ့အားသင့်စရာအဘို့ပြင်ဆင်ပါ !!!
Jason Momoa မှတီးခတ်သည့် Khal Drogo ၏တိပ်ခွေ
လာမည့် fit ။
Kristian Nairn မှတီးခတ်နေသော Hodor နားထောင်ခြင်းတိပ်ခွေ
ခရမ်းချဉ်သီးဆင်ခြေဖုံးရှိအိပ်ခန်းလေးခန်းပါအိမ်၏ဥယျာဉ်တွင်ယင်းကိုရိုက်ကူးထားပုံရသည်။ သူသည်ဥယျာဉ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရင်းဥယျာဉ်ပရိဘောဂအမျိုးမျိုး (နှင့်ကလေးငယ်တစ် ဦး) ကိုခေါင်းပေါ်တွင်တင်လိုက်ခြင်းသည်၎င်းကိုယခုထိဖျော်ဖြေမှုအရှိဆုံးဖြစ်လာသည်။
EL ည့်သည်တွေအပါအ ၀ င်ဒီနှစ်မိနစ်ကြာကျော့ကွင်း
မတင်းကျပ်ပါ လူတိုင်း အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အခြားသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ရရှိနိုင်သည့်စာရင်းစစ်တိပ်ခွေများကိုတစ်ခုတည်းသို့လှိမ့်ထားသည်။ သရုပ်ဆောင်များ - Tarth ၏ Brienne, Missandei, Ygritte, Bronn, Jaqen H'ghar, Tormund Giantsbane, Margaery Tyrell, Davos Seaworth, Melisandre နှင့်အခြားသူများ !!
• GoT စာရေးဆရာသည်ရာသီရှစ်မတိုင်မီသင်ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည့်ဖြစ်ရပ် ၂၁ ခုကိုဖော်ပြသည်
• နားထောင်ကြ: Thrones ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးရာသီကိုမီးတောက်လောင်စေသောသာဓကကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်
• ငါfThrone ဇာတ်ကောင်များ၏ဂိမ်းသည် uni တွင်ရှိသည်။ ဤအရာသည်၎င်းတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်